16 Antony lehibe mahatonga ny ankizivavy sasany tia zazalahy ratsy - Fifandraisana
16 Antony lehibe mahatonga ny ankizivavy sasany tia zazalahy ratsy
Tsy ny zazavavy rehetra no tia zazalahy ratsy, aleo hazava tsara izany! Na izany aza, ireo izay maniry ny ho tia azy ireo noho ny antony lehibe maromaro.
Samy hafa ny tsirairay, ary manana antony manosika isan-karazany ho an'izay mahasarika azy, saingy natambatra antony lehibe 16 mahatonga ny vehivavy sasany ho tia ankizilahy ratsy toetra. Avy amin'ny zazavavy tia ankizilahy ratsy fanahy, ity ny lisitray…
aiza i chris chan izao
1. Andao ho marin-toetra - manaitaitra!
Voalohany - ny ankizilahy ratsy tarehy dia manintona fotsiny ary mampientam-po ny mampiaraka. Voatazona hatrany ny rantsantongotra, mahazo buzz amin'ny fanapahan-kevitra ‘ratsy’ isika, mazoto, maivana… mila manohy ve isika?
Anisan'ny antsoin'ny ankizilahy ratsy fanahy ny fahitana fa mampientam-po tokoa izy rehetra. Izany dia ampahany satria ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika dia milaza amintsika foana fa zavatra tokony hipetrahantsika izy io.
2. Tianay ny laza azonay amin'ny fikambanana.
Raha mampiaraka zazalahy ratsy fanahy ianao dia tsy maintsy ho bibidia koa, sa tsy izany? Ny sasany amintsika dia tia ny zava-misy fa mahazo laza ho zazavavy ratsy satria mampiaraka zazalahy ratsy fanahy.
Tianay ny fiheverana ataon'ny olona momba anay - mahafinaritra izahay, tsara eo am-pandriana, manao firaisana izahay ary mampidi-doza.
Ireo bandy mampiaraka izay manahirana na vaovao ratsy fotsiny dia mahatonga antsika ho toy izany amin'ny alàlan'ny default, ary mahazo buzz hafahafa isika amin'ny fahalalana fa mihevitra ny rehetra ho ratsy isika.
3. Tsy fantatsika ny fomba hiatrehana ny fitoniana - na raha mendrika izany aza isika.
Betsaka amintsika no efa nanao fifandraisana tsy salama taloha - na tamin'ny ray aman-drenintsika na ireo mpiara-miasa amintsika. Tsy tena fantatsika hoe inona no ho toy ny firaiketam-po azo antoka sy azo antoka satria efa be ny fanakorontanana na tsy fahampian'ny fahazarana teo amin'ny fiainantsika.
Araka izany dia mahita fampiononana isika amin'ny fahatsapana ho tsy azo antoka na amin'ny sisiny. Miezaka ny hanohy izany izahay amin'ny alàlan'ny fandehanana any amin'ireo lehilahy tsy misy ara-pihetseham-po, somary ratsy toetra, na tsy mahavita tena.
Mampahatsiaro antsika ho azo antoka izany satria efa zatra izany - toy izany koa, ny fifandraisana feno fanoloran-tena sy maharitra dia mahatonga antsika hahatsapa hafahafa sy tsy misy toerana, satria tsy haintsika ny fomba ho amin'ny iray.
Ny ampahany amin'ity dia tonga amin'ny zava-misy fa tsy fantatsika na isika aza mendrika fifandraisana tsara sy mahasalama.
Tena voafintina tamin'ny zava-niainantsika rehetra teo aloha izahay ka tsy fantatray raha mendrika ny zavatra rehetra azon'ny 'bandy tsara' atolotra izahay, toy ny fahazoana ara-pientanam-po, fifandraisana ary fitiavana.
Mifikitra amin'izay fantatsika sy izay heverinay fa mendrika, mifototra amin'ny fahazarana noforoninay nandritra ny taona maro. Ny zazalahy ratsy dia manome antsika izay nahazatra antsika, ary izany dia mahatonga antsika hahatsapa ho mahazo aina.
4. F * ck anao ho an'ny taloha izahay.
Okay, kely fotsiny ity iray ity, fa efa teo daholo isika. Vao tsy misy fifandraisana ianao ary te hiverina amin'ny vadinao taloha. Ny fomba tsara indrindra hanaovana an'izany? Mandrosoa - miaraka amin'ny olona hafa tanteraka amin'izy ireo.
Raha mahita ny sarinao ny olon-tianao taloha miaraka amina lehilahy miaraka amin'ny moto, rakotra tombokavatsa ary rovitra tanteraka dia hahatsapa tahotra sy fako mahafinaritra momba ny tenany izy.
Ary, amin'ny lafiny sasany, izany no karazana tadiavinao. Te hiverina any amin'izy ireo ianao ary hahatonga azy ireo hahatsapa ho tsy misy dikany sy hadinon'izy ireo - toy ny nampahatsapan'izy ireo anao rehefa nanary anao izy ireo.
Tsy mamporisika an'ity fihetsika ity izahay na milaza fa mahasalama na ara-drariny, saingy manazava ny antony itiavan'ny tovovavy sasany ny ankizilahy ratsy fanahy.
5. Tianay ny tantara an-tsehatra.
Hanao ahoana ny mampiaraka raha mahazo sms foana izahay ao anatin'ny minitra vitsy, na raha tsy nanana namana vehivavy mafana be ilay sipantsika?
Mety hahafinaritra tokoa!
Na izany aza, izahay dia notontosaina tamin'ny fandaharana amin'ny fahitalavitra sy ny sarimihetsika mba tsy hibanjina foana ilay tovolahy niaraka. iSIKA eFA hiantso ny sakaizantsika raha maharitra adiny iray mahery ilay bandy, ary izahay tokony mandany divay tavoahangy iray farafahakeliny b * fikolokoloana ireo naman'ny vehivavy sakaizanay.
Resy lahatra izahay fa tsy maintsy mahita tantara an-tsehatra amin'ny fiainantsika mampiaraka, noho izany dia mitady mpiara-miombon'antoka izay hanome ny ambaratonga avo indrindra amin'izany izahay.
Tianay ny olona iray fantatsika fa angamba hiteraka korontam-bato ho antsika, izay hahatonga antsika hametra-panontaniana momba ny fifandraisana, izay hamela antsika hamaky mandritra ny andro maro. Ataontsika ao anaty tsy fahatsiarovan-tena izany, fa mbola ataontsika ihany - ary izany no mahatonga antsika hanintona ankizilahy ratsy fanahy matetika.
6. Manam-pananahana izy ireo ary tsara kokoa eo am-pandriana, sa tsy izany?
Misy zavatra momba ny zazalahy ratsy fotsiny izay mahatonga azy ireo hanao firaisana ara-nofo. Angamba izy rehetra no tantara an-tsehatra (voalaza etsy ambony) na ny fahatezerana mirehitra sy ny firehetam-po. Na inona izany na inona, tadiavinay izany - ary azonay antoka fa hahafinaritra be izany.
Avy eo misy stereotype iray fa ny zazalahy ratsy tarehy dia tsara eo am-pandriana - mahaliana kokoa izy ireo, mpihaza kokoa, ary be fientanam-po kokoa noho ny lehilahy tsara sy mahazatra. Nahasarika an'izany izahay na inona na inona amin'ny zavatra hafa rehetra, ary te hanana fiainana mamoa fady izahay!
7. Izahay dia amin'ny fomba manimba tena.
Eny ary, efa niresaka momba ny firaisana amin'ny spice-up izahay, saingy tonga ny fotoana hanaovana serieux vetivety. Ny sasany amintsika dia misafidy ny hiaraka amin'ny zazalahy ratsy satria mandia dingana manimba tena isika.
ny fomba hampitsaharana ny codependent ao amin'ny fanambadiana
Saika isika te handalo fisarahana, ka mitady safidy izay izahay mahalala tsy tsara ho antsika. Manintona antsika zavatra izay hahatonga antsika tsy hahatsapa ho ratsy amin'ny tenantsika isika, satria te hiaina ireo fihetsem-po ratsy ireo. Hafahafa, fantatsika, fa tsy fahita.
8. Nahazo vavahady nilahatra izahay.
Raha fantatrao fa tsy hiasa miaraka amin'ity lehilahy ity ny raharaha dia efa fantatrao fa azonao atao ny mamarana azy noho ny maha zazalahy ratsy azy ireo.
Izy io dia mifamatotra amin'ilay teboka etsy ambony - mitady zavatra ratsy hitranga isika, saingy mila fialan-tsiny hialana amin'izany rehefa mila izany.
Amin'ny alàlan'ny fampiarahana amin'ny olona tsy mety amintsika, na hoe isika mahalala dia vaovao ratsy, manome ny tenantsika ‘mandeha ho azy isika.’ Izany dia afaka manampy antsika hahatsapa fifehezana bebe kokoa ary midika izany fa afaka manaraka ny famotehana tena etsy ambony isika amin'ny fotoana rehetra irintsika.
9. Nahazo isika olan'ny dadany .
Ny iray amin'ireo antony itiavan'ny tovovavy sasany ny zazalahy ratsy dia satria tsy nifandray tsara tamin'ny dadany mihitsy izy ireo.
Raha tsy hain'izy ireo ny manana fifandraisana salama amin'ny lehilahy, amin'ny ambaratonga rehetra, dia mety ho voatarika amin'ny safidy ratsy izy ireo satria tsy mahalala tsara kokoa, araka ny noresahantsika tamin'ny fiandohan'ity lahatsoratra ity.
Na izany aza, ny sasany amintsika koa dia manandrana mifehy ny olan'ny fahazazantsika amin'ny famerenana azy ireo araky ny fe-potoantsika. Raha nanana fifandraisana ratsy tamin'ny rainao ianao rehefa nihalehibe dia mety noho ny fihetsika nataony mihoatra noho ny nataonao - indrindra satria izy no olon-dehibe tamin'io toe-javatra io.
Mba hialana amin'izany dia mitady toe-javatra misy ianao ianareo mety ho ny antony tsy mahasalama ny fifandraisana amin'ny lehilahy. Raha mifanaraka amin'ny fepetra apetrakao io dia tsy afaka handratra izany ianao.
Raha tokony hiatrika ny olana amin'ny rainao ianao dia mitazona hatrany mamerina ireo lamina tsy mahasalama mitovy amin'ny lehilahy amin'ny fanantenana fa afaka ‘manoratra’ ireo olan'ny dadanao ireo ianao ary mifehy.
10. Mihevitra izahay fa afaka manova azy ireo.
Mazava ho azy, ny sasany amintsika dia tia tetikasa iray. Mihaona amina lehilahy iray izahay afaka mahagaga, somary ‘fixer-upper’ fotsiny izy.
Tianay ny hevitra amin'ny maha-zazavavy nahavita nampandamina ilay lehilahy dia. Raha azontsika atao ny mipetraka eo amin'ilay zazalahy ratsy toetra mampidi-doza ary manolo-tena, dia tsy maintsy midika izany fa miavaka isika, sa tsy izany?
namadika ahy ny namako akaiky ny zavatra tokony hataoko
Tianay ny mieritreritra ny ho zazavavy amin'ny sarimihetsika rehetra izay mahatonga ny tovolahy hanova ny fomba fanaony - avy amin'ny zava-mahadomelina sy moto mankany amin'ny fanambadiana sy ny ankizy izy rehetra, satria tia antsika izy toy izany be. Fantatra mahafinaritra izany, ary famporisihana ny ego lehibe…
11. Tianay ny fanamby ary leo ny lehilahy mahafinaritra izahay.
Ny sasany amintsika zazavavy dia te hampiaraka amin'ireo olon-dratsy satria tianay daholo ny fanamby amin'izany. Tsy ny fanovana azy ireo akory izany fa ny fihazonana ny miaraka amin'izy ireo.
Leo anay ry zalahy tia anay fatratra ka mandeha miaraka amin'izay rehetra tadiavinay. Mahafinaritra ny ivavahan'ny bandy amin'ny lafiny iray, saingy mety ho mankaleo sy azo vinavinaina tokoa .
Mila fanamby izahay ary maniry izany hahatsapa fanamby. Tianay ny hahatsapa ho toy ny any ivelan'ny halalintsika ary toy ny nahatonga anay hiasa ho azy. Raha tonga mora loatra ny raharaha, dia matetika misy antony ao, sa tsy izany?
12. Ny bandy soa ihany koa manodinkodina antsika - koa mba afaka mitady zazalahy ratsy isika…
Mbola tsy niaraka tamin'ny zazalahy ratsy fanahy mihitsy izahay taloha satria nolazaina tamin'izy ireo fa hofitahin'izy ireo izahay, hataon'izy ireo ho ratsy fanahy izahay, handao anay izy ireo… noho izany tsy raharahainay ny fomba mahasarika azy ireo ary mitady Filokana 'azo antoka'.
Lehilahy iray izay mety hilalao kilalao ambony noho ny tsy mampiasa zava-mahadomelina ao amin'ny klioba amin'ny zoma alina, ohatra.
Saingy, rehefa mamitaka anao ilay bandy tsara sy azo antoka, na mandratra anao amin'ny fomba hafa, dia mahatonga anao hieritreritra - maninona raha miaraka amin'ilay tovolahy tena nahasarika ahy ihany raha ho maratra aho?
Raha toa ka hitovy ny vokany, miorina amin'ny zava-dratsy fa ireo tovolahy tsara efa nampiarahinao dia ratsy ihany, azonao atao koa ny miaraka amina olona tena tianao.
13. Avelany ho ratsy koa isika - miampy, manohitra ny mpanohitra, sa tsy izany?
Ny iray amin'ireo antony itiavan'ny tovovavy maro ny zazalahy ratsy dia satria avelany antsika ratsy ihany koa.
Raha miaraka amina lehilahy mahafinaritra ianao dia mahatsapa fa voatery hiverina tsara. Mety tsy te hanao zava-masiaka izy, ka mampifanaraka ny endriny ianao. Mety tsy hiditra amina zavatra mahaliana eo am-pandriana izy, ka mody tsy ianao koa. Manadino ny tenanao hifanaraka aminy ianao, mba hahafahanao ho mpivady mahafinaritra sy mahafinaritra miaraka.
Rehefa miaraka amin'ny zazalahy ratsy fanahy ianao, na izany aza, afaka maimaim-poana amin'ireo andrasana ireo ianao ary afaka manafaka ny tenanao amin'ny fanaovana ireo zavatra mahaliana sy mitady zavatra mahafinaritra rehetra notazoninao.
Tsy eo ambanin'ny tsindry intsony ianao mba hifanaraka amin'ny stereotype 'zazavavy mahafinaritra', ary tsy hahatsiaro ho menatra na meloka ianao noho ny fanirianao hijery ireo zavatra tsy nidiran'ny sakaizanao farany.
Ny fiarahana amin'ny zazalahy ratsy fanahy dia mamela antsika ho tonga amin'ny endriny ratsy indrindra amin'ny tenantsika, ary tsy misy maharatsy izany…
Ilay fitenenana hoe ‘ mifanohitra manintona ‘Afaka mitombina tokoa raha ny momba ny olona tiantsika hampiaraka. Ka raha tovovavy tsara ianao dia misy vintana matanjaka te hanana zazalahy ratsy ianao, amin'ny fotoana iray farafaharatsiny.
Matetika isika dia tia zavatra izay tsy mitovy amintsika, izany indraindray dia noho isika maniry fampirantiana amin'ilay ‘hafa’, nefa koa satria tianay ny karazany ary tiantsika hiaina zavatra sy olona maro karazana.
14. Tianay izay ratsy ho antsika.
Sôkôla, divay, entina. Ny zavatra voamarika ho 'ratsy' ho antsika dia vao mainka maka fanahy!
Toy izany koa raha ny resaka lehilahy. Tianay ny voarara, na ny fady, ary te handentika araka izay azo atao izahay.
Fantatsika fa 'ratsy' ho antsika izy io, saingy vao mainka isika maniry izany bebe kokoa. Misy siansa vitsivitsy amin'izany - arakaraky ny hamepetrahantsika ny tenantsika sy hametrahantsika ny marika ho ‘tsara’ na ‘ratsy’, no vao mainka voafetra ny fahatsapantsika ary arakarak'izay tiantsika ny hiala sy hanana izay tiantsika fotsiny.
Miaraka amin'ny sakafo, ohatra, raha tenenina ianao fa tsy manana mofo, dia hieritreritra momba ny mofo tsy tapaka ianao mandra-pahatonganao any amin'ny toerana irinao mafy dia hihinana mofo iray manontolo indray mandeha - fotsiny satria voarara.
Toy izany koa ny lehilahy. Hoferanao sy hoferana ary holazainao ny tenanao mba tsy handeha ho any amin'ireo zazalahy ratsy fanahy, mandra-pahatongaranao sy hitadiavanao iray fotsiny satria io no mbola tsy azonao.
15. Manjaka izy ireo ary hiaro antsika izy ireo.
Ny sasany amintsika dia tia ny stereotype an'ny zazalahy ratsy fotsiny. Lehibe sy matanjaka izy ireo, ary hiaro antsika izy ireo. Mety tsy hikapoka ny volontsika izy ireo na hividy voninkazo ho antsika, fa hanomboka ady amin'ny olona tsy manaja anay izy ireo.
Averina indray fa tsy manaiky an'izany izahay, fa miaiky fa manintona.
Betsaka amintsika koa no mila olon-tiana manjaka kokoa. Tianay ny hevitry ny tovolahy iray izay tsy matahotra milaza ny heviny, ary olona iray izay hiantso ny tifitra ary handray fanapahan-kevitra ho anay.
Tsy ny tovovavy rehetra no maniry an'io, mazava ho azy, fa misy stereotype kely fotsiny fa ny tovovavy tia ankizilahy ratsy fanahy dia tsy mahay mandanjalanja ary mandefitra ny tenany. Tian'izy ireo ny olon-kafa mandray fanapahan-kevitra, ary mila olona handray an-tanana izy ireo.
16. Momba ny hormona daholo.
Ny hormonina misy antsika dia manova zavatra maro mandritra ny volana, saingy mety tsy fantatrao fa manova karazana tovolahy mahasarika antsika koa izy ireo.
Amin'ny fotoana samihafa isam-bolana, miovaova ny haavon'ny hormonina sasany, ary mety hahatonga antsika hanintona karazan'olona isan-karazany mandritra ny dingana samihafa amin'ny tsingerinay.
Amin'ny dingana sasany amin'ny tsingerim-bolana, dia manintona olona mahafinaritra manana endrika symmetrika isika, ohatra, izay manome pheromones mahafinaritra ary toa dadany tsara.
rehefa misy bandy tsy ao aminao
Amin'ny dingana hafa amin'ny tsingerinay dia mila loza sy fientanam-po isika, ary azo inoana fa manintona olona ara-tsiantifika kokoa isika na lehilahy bandy manao tombokavatsa, manindrona tarehy, ary tsy mahay miresaka, ohatra.
Ilaina ihany koa ny pheromones, ary mino ny mpahay siansa fa mitana andraikitra lehibe manintona izy ireo. Ankehitriny, ny ankizilahy ratsy fanahy dia tsy voatery hoe manana pheromone ‘mahasarika’ kokoa, fa mety misy fifandrifian-javatra ao ihany no mbola ho hita!
Tsy misy dikany izany hoe tsy misy siansa na antony ao ambadik'izy ireo ny safidin'ny sasany. Indraindray, tiantsika fotsiny izay tiantsika - izany no hatsaran-tarehy manintona!
Hatraiza ny maha-zava-dehibe ny fahasarotana ara-batana amin'ny fifandraisana? 7 zavatra tokony hodinihina
Fa maninona no miafara amin'ny fifandraisana ny empaths sy ny mpifoka rongony?
Ahoana ny fomba hiarahana mampiaraka sy hifaneraserana amin'ny mpiara-miasa iray ialana
Famantarana 12 Lehilahy iray mpilalao: Ahoana no hahalalana tsara
inona no hatao mandritra ny fitsingerenan'ny taonan'ny sakaiza
ny fomba hialana amin'ny fahatsapana ho meloka amin'ny lasa
tsy hisy hahatakatra ahy mihitsy